SIDA LOO QUUDIYO DIGAAMDUUR: TALOOYIN WAXTAR LEH - BEERAHA DIGAAGA
Dhammaan beeralayda digaaga ee go'aaminaya inay ka soo baxaan boodhadhku waa inay ogaadaan in waxa ugu muhiimsan ee tarankooda ay tahay nafaqo haboon ee shimbiraha.
Haddii aad wax kasta oo saxda ah sameyso waxaad ku guuleysan doontaa guul weyn.
Caadi ahaan xadgudubka caafimaadka ee shimbirku waa cunto cunidda.
Waxaa jira khilaaf badan oo u dhaxeeya beeraleyda digaaga ee ku saabsan quudinta quudinta.
On sifooyinka, cunto iyo dhammaan fitamiinada lagama maarmaanka u ah boodhadhka, waxaan ka wada hadli doonaa maqaalkan.
Noocyada quudinta boodhka
Shimbiraha waxay cuni karaan quudin kala duwan. Xaaladda ugu weyn ee nafaqada waa cunto cusub, iyada oo aan wax lagu daro. Quudinta qalalan ayaa lagu dari karaa nafaqo dheeraad ah.
Noocyada kala duwan ee cuntada qoyan waa inay ku jirtaa nuqulada aan ka badnayn laba saacadood laga bilaabo wakhtiga xisaabinta, haddii aanad u hoggaansamin xaaladdaas, markaas boodhadhku wuxuu ku sumoobi karaa cuntada caadiga ah.
Intaa waxaa dheer, cuntada qoyan waa in lagu qaso siriyaal kasta, si ay u noqoto mid aad u jajaban. Isku-baddelka cawska ayaa ah mid ku habboon quudinta shimbiraha.
Xulashada ugu wanaagsan ee lagu quudiyo shimbirahaasi waxay noqon kartaa quudinta xayawaanka lakabka lakabka. Beeralayda digaaga ayaa intooda badan ku talin kara quudintaas
Doorashada labaad ee quudinta digaagduurku waxay noqon doontaa quudin for broilers, inkastoo ay tahay wax yar ka xun. Ku dhowaad hal shimbir ayaa u baahan doona hal kiilo garaam bishii.
Haddii aad doorbideyso ku quudi shimbiraha xayawaanka guriga, ka dibna waa inay ku jiraan baakado la jajabiyey (biskoolka, semolina, chaff raff iyo kuwo kale), boodhka dhulka laga soo qaato rootiga cad (laakiin mararka qaarkood waxaad ku dari kartaa karootada rootiga madow), iyo sidoo kale alaabooyinka ay ku jiraan borotiinka iyo fiitamiinada waxtarka leh.
Qiyaasta cuntooyinka guud, borotiinku waa inay sameeyaan hal shanaad. Waxyaabaha soo socda ayaa laga yaabaa inay ku habboon yihiin borotiinno: hilibka la kariyey, hilibka - cuntada lafaha, kalluunka la kariyey, cunto kalluunka, ukunta la kariyey ama budada ukunta, waxyaabaha caanaha laga sameeyo, jiis ama caano qallalan. Sidoo kale, cuntooyinka kalluunka waxaa lagu dari karaa borotiinka: maggots, geedka qallalan iyo kuwa kale.
Qaybaha fitamiinada ee digaagga cuntada
Sida qayb ka mid ah faytamiinada cuntooyinka qorraxda ayaa loo daadi karaa isku darka diyaar ah ee digaaga iyo geedka digaagga, oo laga iibsan karo dukaamada xayawaanka ama meelaha kale ee iibinta xoolaha.
Sida loo quudiyo fiitamiinada shimbiraha ayaa lagu tilmaamayaa tilmaamaha. Laakiin waxaa dhici karta in aysan jirin wax fursad ah oo lagu iibsado fitamiino iyo macdano shimbiraha ah, ka dibna waxaa lagu iibsan karaa farmasiyada, kuwaas oo u baahan in la kariyo oo lagu daro cuntada caadiga ah.
Iyada oo si joogto ah loo isticmaalo noocyo badan oo kala duwan, marwalba marba mar Faytamiin D waa in lagu daraa cuntada digaaga. Shimbir shimbir waxay ubaahan tahay maalin kasta qaadashada D2 (ergocalciferol) oo ah qiyaastii 3000 IU ama D3 (oo ah cholicalciferol) oo ah qiyaastii 100 IU.
Shimbiruhu uma baahna keliya fitamiinada dheeraadka ah, laakiin sidoo kale macdanta. Wixii macdanta ah, waxa fiican inaad sameysid quudin gaar ah. Xayndaabkani waa inay had iyo jeer noqdaan ukunta.
Marka lagu daro qolofka ukunta, waxaad ku daadin kartaa qolalka badda, dhulka digaagga ama cawska, halkaas oo aad ku dari kartaa quraar qurux leh oo leh jajab ah 2-3 millimitir.
Haddii canjiyadaaga ay ku nool yihiin kabo ama shimbir kale oo hoy ah, waxay cuni karaan hadhuudh iyaga oo leh. Daryeelka waa in la qaato si aan loogu darin madoowga aan la daboolin.
Haddii shimbirta cuno madoow aan loo baahnayn, marka ugu dhakhsaha badan waxaa laga yaabaa inay dhibaato ka haysato mareenka caloosha iyo mindhicirka, kadibna gebi ahaanba u dhintaan. Cuntada ugu fiican ee digaagduurtu waa jibbaar cas.
Quail waxay jecelyihiin cagaarka cusub: dharka qoryaha, qashinka, yartahay qashinka iyo cawska kale ee la jarjaray. Shimbiruhu waxay noqon doonaan karootada digaag leh oo aad u fiican iyo tufaax caan ah. Hase yeeshee, iyaga oo ka baxsan caws iyo miro maaha mid u qalma, haddii kale waxaad ku dhamaan doontaa ukun yar, ama xataa shimbiraha ayaa joojin doona quudinta.
Dhamaan bakhaarada cunnada waa in lagu dheellitiraa, kaliya xaaladdan shimbirta ayaa ku farxi doonta oo caafimaad leh.
Maxay tahay inay tahay boodhka awoodda leh?
Habka saxda ah ee shimbiraha quudinta waa saddex cunto maalintii ama afar jeer maalintii. Inta ugu badan oo dhan, marka cunto la siin doono iyaga isla waqtigaas. Si arrintan loo sameeyo, u qaybso quudinta si siman.
Hoobiyayaal qaangaar ah waxay u baahan yihiin qaadashada borotiinka maalin kasta. Waa lagama maarmaan in la raaco maalin kasta. Haddii ay jirto borotiin aad u badan ama wax yar oo wareeg ah, ka dibna waxay saameyn kartaa ukunta la dhigay: midkoodna wax yar baa ka yaraan doona, ama waxay noqon doonaan kuwo aad u yar.
Qadar ku filan ee borotiinka ee cuntada ayaa yarayn kara wax soo saarka ukunta ee dheddigga, taas oo keenta jiritaanka. Cunto badan oo ah borotiinka cuntadu waxay kordhisaa suurtogalnimada muuqaalka laba xabbadood oo ukunta ah.
Haddii muddo dheer ku dhacdo carqaladeenta dheef-shiid kiimikaadka ee jirka shimbir, ka dibna tani waxay saameyn kartaa caafimaadkeeda.
Quudinta caadiga ah waxaa ku jira qadar yar oo borotiin ah. Sidaa darteed, quudin kasta oo quudinta waa in lagu daraa walxo uu ku jiro borotiin (jiis, kalluun iyo kuwo kale), qiyaas ahaan laba garaam oo digaagduur.
Haddii aad quudiso shinni hadhuudh ah, qadarka borotiinka waa in la kordhiyaa ilaa labaatanka grams per bakeeriga qof weyn. Dumarka aan sii socon karin, sababtoo ah da 'wayn, waxay u baahan yihiin qaadashada borotiinka yar. Digaaggu wuxuu u baahan yahay borotiin badan oo lagu daro quudkooda marka loo eego boodhadhka duurka.
Faytamiinada waa in la siiyaa shimbiraha, inta badan way ka sii fiican tahay..
Qaybta ugu weyn ee cuntada, qiyaas ahaan afartan boqolkiiba, waa in la siiyaa nuuca ugu dambeeya ee maalinta, gaar ahaan marka ay timaado isku dhufashada miraha, maadaama ay si dhakhso ah u tirtirtay, shimbirna ma gaajoonayso habeenkii oo dhan.
Dhammaan xayawaannada ayaa si fiican ugu baxa gaajo, sidaas darteed waxay yeelan doonaan wax soo saarka ukumaha sareeya. Laakiin qayb ka mid ah beeralayda digaaga ayaa aaminsan in nuujinta ee feedereyaashu waa inay noqdaan kuwo joogto ah.
Xannibaadaha si joogto ah u buuxsamay waxay keeni karaan xaalad jilicsan oo shimbiraha ah, iyo xataa si ka badan si cayilku. Kaddibna waxay keentaa hoos u dhaca soo-saarka ukunta iyo kororka isticmaalka quudinta shimbiraha.
Beeralayda waaweyn ee digaaga, boodhka waxaa lagu quudin jiray feederiyeyaasha suufka. In troughs sida ku shub cuntada ku xiran tahay heerka maalin kasta isticmaalka quudinta by digaagga.
Waxa kale oo xiiso leh in la akhriyo oo ku saabsan dhisidda qafis for digaaga gacmahaaga.
Maxaad u baahan tahay inaad dareenka ilaaliso markaad quudinayso digaaga?
Fiirinta shimbiraha quudinta waa lagama maarmaan, marka ugu horeysa, marka la eego nuxurka asaasiga ah ee asaasiga ah ee loo yaqaan 'amino acids' si ay u quudiyaan, sida: lysin, methionine, cystine, tryptophan. Qaybahan waxaa loo yaqaan 'limiting', sababtoo ah qadarka amino acids kuwaasi waxay go'aaminayaan baahida loo qabo in laga helo ashyaa ka baxsan aminoka.
Iyada oo adeegsiga aan ku filneen shimbir ugu yaraan hal ka mid ah qaybahan ayaa si dhakhso ah u saameeyaa wax soo saarka, iyo sidoo kale koritaanka iyo horumarinta digaaga.
Lysine wuxuu xaqiijiyaa koritaanka degdegga ah ee xayawaanka yaryar, xayawaan wanaagsan, caadiyan beddelka nitrogen ee jidhka, wuxuu xoojiyaa lafaha shimbiraha, waxaana sidoo kale loo baahan yahay qalabka nucleoproteins.
Haddii ay jirto maqaar la'aan, markaa taasi waxay si dhakhso ah u saameeysaa kobcinta shimbiraha iyo wax soo saarka, muruqyada way yar yahiin, calciumku waa yar yahay, baaluqu wuxuu noqonayaa mid qalalan oo jaban, wuxuuna saameyn xun ku leeyahay shucaaca. Nuucyada unugyada cas ee dhiigga iyo xinjirowga ayaa yaraaday.
Liisin-ka xad-dhaafka ah wuxuu saameyn ku yeelan karaa shimbiraha. Cuntada dhirta waxaa ku jira qadar aad u yar oo lizin ah, iyo xayawaan ku quudinaysa lidkeeda waa mid aad u badan.
Methionine waxay saameysaa koritaanka iyo horumarinta shimbiraha yar yar, waxaa loola jeedaa ilaha suntu u socoto jidhka shimbirta, iyadoo caawimaadda methionine ka dhacdo dareen-celinta casriga ee jirka.
Methionine waa mid ka mid ah ka qaybgalayaasha abuuritaanka serine, creatine, cystine, qadka, kaas oo ku leh doorka hogaaminta ee metabolismka jirka. Methionine waxay maamushaa dheef-shiid kiimikaad ee dufanka beerka, taas oo ah, ka saarida dufanka xad-dhaafka ah.
Sidoo kale, amino acid this loo baahan yahay for formation of baadad ee digaagga. Meationine la'aanta methionine ee shimbiraha shimbiraha ayaa keena cawaaqibta soo socota: koritaanka hoose ee xayawaanka yaryar, la'aanta cunto xumo, dhiig yari. Haddii digaagduurtu koraan si ay u soo saaraan hilibka, markaa baahida loo qabo amino acid waxay kordhisaa.
Cystine waxa loo baahan yahay abuuritaanka baalal, oo ku lug leh dheef-shiid kiimikaad, carbohydrate-ka, fal-celinta keratin, insulin, iyo cystine waa aamino dhexdhexaad ah marka walxaha sunta ah iyo kansarku galaan jirka shimbirta.
Astaamadan amino-yada, sida kuwa kale, waxay aad muhiim ugu tahay jiritaanka digaagduur. Meesheeda waxay noqon kartaa methionine. Iyada oo ay ku yar tahay nuxurka maqaarka ee shimbir shimbir, waxaa laga yaabaa inaanay u adkeysan karin cudurada faafa, beerka beerka ayaa dhici karta, iyo baadad si liidata u koraan.
Tryptophan waxaa loo baahan yahay koboc wanaagsan iyo horumarinta shimbiraha, iyo sidoo kale dhalmada. Amino acid ayaa loo baahan yahay si loo xakameeyo cadaadiska dhiigga, koritaanka caadiga ah ee baaluqa, unugyada hemoglobin, ayaa ka soo horjeeda horumarka pellagra.
Badeecooyinka waxay u baahan yihiin ciriiri yar oo ka yar tan kiimikaad kale, maadaama ay bedeli karto nicotinic acid (tusaale ahaan, khamiir). Tryptophan waxay ku lug leedahay horumarinta embriyaha iyo bacriminta.
Iyadoo la'aanta amino acid this kori karaa miisaanka degdeg ah ee shimbirta., atrophy ee qanjirada endocrine, dhiig yari, tayada dhiigga oo liita, difaac yareyn.
Arginine waxay saameysaa heerka koritaanka ee baadad, miisaanka korodhka, ka qayb qaadashada isugeynta unugyada unugyada unugyada nuclear, spermatogenesis iyo metabolism of carbohydrates. Arginine waa amino acid kaas oo sameeya curiyaha iyo creatinine ee jirka, taas oo lagama maarmaan u ah dheef-shiid kiimikaadka saxda ah ee jirka shimbirta.
Iyada oo ay ku yar tahay arginine ee jirka, shimbiraha, cunto yari hoos u dhaco, wax soo saarka ukunta hoos u dhaco, iyo kobaca yar yar waa digaagduur.
Baahida loo qabo leucine waxay ku jirtaa dheef-shiid kiimikaad hooseeya. Qadar aan ku filneyn oo ah aashitadani waxay horseedi kartaa rabitaanka cuntada, leexashada iyo horumarinta digaaga, dheef-shiid kiimikaadka hooseeya.
Si nidaamka dareemayaasha ee shimbirta si sax ah u shaqeeyaan, waxaa loo baahan yahay valine. Iyadoo ay la'yihiin cunto xumo, hoos u dhaca isku-duwidda, joojinta koritaanka xayawaanka yaryar.
Histidine waxaa loo baahan yahay si loo hagaajiyo koritaanka iyo horumarinta shimbiraha, iyo sidoo kale in la nidaamiyo metabolismka. Dhibaatadu waxay keeni kartaa hoos u dhac ku yimaada kobaca, miisaanka luminta iyo hoos u dhaca cuntada.
Glycine waxay lagama maarmaan u tahay koritaanka shimbiraha, sameynta nudaha naqaska, iyo sidoo kale waxay lagama maarmaan u tahay nafaqeynta maaddooyinka sunta ah qaarkood. Cudurkaan amino-ku wuxuu ugu wanaagsan yahay cuntada, hadhuudhka, taas oo markaas saameyn doonta koritaanka wanaagsan ee shimbirta.
Phenylalanine waa qeyb muhiim ah oo ku jirta dhiig-samaynta iyo sameynta hormoonnada. Iyadoo la'aanta fenylalanine, qanjirada indho-dareenka si fiican uma shaqeynayaan miisaanka shimbirta ayaa hoos u dhacaya. Waa muhiim in la ogaado in qaar ka mid ah asiidhyada amino-ka la magdhabi karo kharashka dadka kale.
Markaad cunno qaadashada shimbirtaada, waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso saamiga qaacidada ammaaka, tan iyo inta badan ama yaraanta qaar ka mid ah, isbeddelka asiidhyada kale ee amino iyo sidoo kale hoos u dhigidda borotiinka synthesis ayaa hoos u dhigi kara.
Iyadoo aan ku filnayn isticmaalka karbohidratka iyo dufanka, borotiinku waxa loo isticmaalaa jirka iyo samaynta kuleylka iyo baruurta.
Haddii shimbiruhu bilaabaan inay koraan dufanka, macnaheedu waa inaysan jirin borotiin ku filan jirka. Cunto quudinta ayaa ah midka ugu qaalisan, sidaas darteed isticmaalkeeda waa wax aan faa'iido u lahayn beeralayda digaaga, marmarka qaarkoodna waxay sidoo kale waxyeello u tahay digaaga.
Si loo kordhiyo borotiinka, baruurta farsamada ama fosfatide ayaa lagu dari karaa isku darka cuntada.
Carbohydratesku waa qayb weyn oo ku jirta quudinta. Carbohydratesku waxay door weyn ka ciyaaraan jidhka shimbiraha. Waxaa loo baahan yahay inay soo celiyaan tamarta. Iyadoo la'aanta carbohydrates la'aan, waxaa jira daciifnimo, lumitaanka rabitaanka cuntada, hoos u dhaca heerkulka jidhka. Carbohydrates waxaa laga helaa quudinta badarka.
Dufanku sidoo kale wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa jiritaanka digaagduur, waxay u adeegaan ilaha tamarta. Xilliga qaboobaha, dufanka ayaa lagama maarmaan u ah in la joogteeyo heerkulka jirka ee caadiga ah.
Haddii dufanka jirka ee shimbirta ay sameeyaan karbohidraatka, ka dibna ay ka kooban tahay mid la mid ah dufanka caadiga ah, jidhka dufanka digaaga ayaa la dhigaa, taas oo aan caadi ahayn nooca noocaan ah, waxayna la mid tahay dufanka in shimbiraha ay la socdaan raashinka.
Halkan, tusaale ahaan Haddii digaagduurku ay bixiyaan cunto kalluun badan, markaa hilibkoodu wuxuu yeelan karaa dhadhan xun. Dufanka dufanku wuxuu ka kooban yahay asiidh dufan leh oo aan caan ahayn (sida linoleic, linolenic, iyo arachidonic), taas oo aan la soo saari karin digaagga.
Acids-ka, sida fitamiinada qaarkood, yareeyaan kolestaroolka dhiigga, waxay yareeyaan khatarta xididdada dhiigga si loo adkeeyo. Waa inay noqdaan digaagduur, cunto la'aan iyo maqnaanshaha shimbiraha oo hor istaagtay koritaanka iyo horumarka.
Waxaa la ogyahay in tusmooyinka ugu fiican ee digaagga sii kordhaya si ay u helaan hilibka waxaa la helaa iyadoo lagu darayo waxyaabaha soya cuntadooda, ama xayawaano kale oo ay ku jiraan astaamaha dufanka. Kalluunka ilaa afar iyo toban maalmood ayaa la siin karaa ilaa 3% dufan.
Nafaqada loogu talagalay qufacu waa inay ka kooban tahay seddex illaa afar boqolkiiba baruurta, iyo kuwa digaaga ee koray hilibka waxaa la siinayaa ilaa boqolkiiba shan dufanka.
Laakiin waxaad u baahan tahay inaad hubiso inaysan jirin dufan badan oo ku jira quudinta shimbirta, sababtoo ah xad-dhaafku wuxuu sababi karaa cudur beerka ah ama xitaa dhimashada digaaga. Waa in la ogaadaa in cuntada la soo iibsaday aanay sheegin mawduuca karbohidratka iyo dufanka, ku rid baakada waxay muujinaysaa qiimaha tamarta tamarta ah.
Macdanta ayaa lagama maarmaan u ah inay ilaaliyaan nolosha caadiga ah ee shimbirta. Maaddooyinkaasi waxay door muhiim ah ka ciyaaraan nidaaminta nafaqada ee unugyada, ku jira dheef-shiid kiimikaad oo ka mid ah jirka shimbirta. Macdanta ayaa lagama maarmaan u ah dhismaha qolofka.
Xaydhuhu waxay u nugul yihiin la'aanta macdanta iyo walxaha raadraaca, sababtoo ah waxay si dhakhso ah u koraan, waxay leeyihiin dheef-shiid kiimikaad degdeg ah, iyo sidoo kale shimbiraha waxay leeyihiin qiyaasta wax-soosaarka ukumaha sare.
Maxaa aan la quudin karaynin digaagduur?
Shimbiraha lama siin karo caleemo yaryar, baradho, celery, euphorbia iyo dhir.
Iyo sidoo kale waa wax aan suurtagal ahayn in ay ku quudiyaan cagaarka iyo miraha dalagyada solanaceous, sorrel, cagaarka iyo bakeeraha qoyaan, galley iyo lupin.
Sida loo abuuro iyo u koraan strawberries kala duwan-strawberry kala duwan "Pandora"
Iswiidhin jilicsan ee lo'da